Rita, Writing for My Sake!: We, women are...
We, women are...
သူငယ်ချင်းရဲ့ email ပါပဲ မိန်းမတွေကို နှက်ထားမှန်းသိပေမယ့် Idea ကို သဘောကျလွန်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
သင်္ချာ equation တွေရော ... electronic circuit လိုလို ပုံတွေရော ... Characteristics Graph တွေရော ရောမွှေပြီး "မိန်းမ" ဆိုတာကို definition ဖွင့်သွားပုံများ ... ဘာမှ ပြောမနေနဲ့ ... အဲဒါ ယောက်ျားတစ်ယောက်ထွင်လိုက်တာ ဆိုတာ သေကို သေချာတယ်...
ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ဘယ်မိန်းမမှ ယောက်ျားတွေကို equation ထုတ်ဖို့ စိတ်မင်စားဘူး... မိန်းမချင်း...ပိုတောင် စိတ်မ၀င်စားသေး...
Posted by Rita at 10/19/2008 02:16:00 PM
Labels: email, Women
blue soul said...
တကယ်စိတ်မဝင်စားတာလား rita လေသံကလည်း ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်လိုလို ရွဲသလိုလိုနဲ့ပါလား အသည်းကိုခွဲသွားဖူးတဲ့ မောင်မောင်မ လေးများရှိလို့လား ငါ့အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် မိန်းမချင်း စိတ်မဝင်စားတဲ့မိန်းမ၄မျိုးရှိတယ် ၁ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၂ အပျိုမဟုတ်တဲ့မိန်းမ ၃ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် စိတ်ကူးယင်တဲ့သူ ၄ အသိညာဏ်မဖွိံဖြိုးတဲ့မိန်းမ မင်းရော ဘယ်အစားထဲကလဲ'???????????
စာဖတ်တဲ့အခါ တပုဒ်လုံးရဲ့ ဆိုလိုရင်း၊ ရှေ့ဝါကျတွေထဲက သယ်လာတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ နောက်ဝါကျထိ သက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံ comprehension skill လေးတောင် မရှိတဲ့လူတွေဟာ ဘယ်စာမှကို လိုက်ဖတ်မနေသင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်။
She, falls into LOVE
My Beloved Friend, Su
It's me! ...on 'Vogue'
ကျွန်မ ရှာဖွေနေသော မြန်မာ ဂန္ထ၀င် သီချင်းများ
That & This (Not This & That)